Hmone Hmone's Birthday Donation Event Video - Part2| Myanmar Celebrity Gossip & News
Hmone Hmone's Birthday Donation Event Video - Part 2
သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့က ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မှုံမှုံ ရဲ့ မွေးနေ့အလှူပွဲ ဗီဒီယို - အပိုင်း ၂ Video of MyanmarCelebrity.Com
Video on Youtube!!! This isavideo of Myanmar Popular Model and Actress Wutt Hmone Shwe Yi's Happy Birthday and Donation Event. Wutt Hmone celebrated her Birthday Party happily together with her fans and some orphans today (14 August 2011) at Kandawgyi Park, Yangon.
eiAugust 17, 2011 at 9:40 PMတကယ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ မွေးနေ့တိုင်းယခုကဲ့သို့လှူနိုင်ပါစေမထက်ထက်တို့လည်းအရင်ကမွေးနေ့တိုင်း မိဘမဲ့ကလေးတွေကို လှုခဲ့ဘူးတယ် အနုပညာသည်တိုင်း ပကာသနအကျိုးမမျှော်ကိုးပဲ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ လှူနိုင်တန်းနိုင်ကြပါစေ....ReplyDeleteunknownAugust 18, 2011 at 7:40 AMhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100000166999133&sk=photos#!/note.php?note_id=190118287720028ReplyDeletelucyAugust 20, 2011 at 10:59 AMအရမ်းပဲအားကျမိပါတယ်ReplyDeleteMinAugust 22, 2011 at 4:26 AMသာဓုဗျာ တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးလေးတွေကို လှုပေးစောင့်ရှောက်ပေးနေသူတွေကို လေးစားတယ်ဗျာ။နောင်ပါဝင်ခွင့်ရချင်တယ်။ReplyDeleteye2011nightAugust 24, 2011 at 2:58 AMအရမ်း လှတယ်နော်ReplyDeleteacinaAugust 29, 2011 at 11:05 AMI love you thank you good bayReplyDeletekkAugust 31, 2011 at 11:29 AMI love her more then b-4 :)ReplyDeleteAdd commentLoad more...